Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo Cunard dia namoaka horonan-tsary niampita transatlantika manome aingam-panahy
Ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo Cunard androany dia namoaka horonantsary iray izay mampiseho ny traikefa nahafantarana ny toetrandro transatlantika momba ilay mpiaro ny ranomasimbe Queen Mary 2.
Ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo Cunard androany dia namoaka horonantsary iray izay mampiseho ny traikefa nahafantarana ny toetr'andro tamin'ny sambo mpiambina andriambavy Queen Mary 2. Ireo vahiny nasongadina tao amin'ilay horonan-tsary dia mamaritra ny sonian'ny sambo fitaterana fito alina niampitana ny Transatlantic Crossing, izay mandeha eo anelanelan'ny New York, Etazonia sy London, UK ho fomba tokana sy tsy hay hadinoina handosirana ny fiainana andavanandro.
Ao amin'ny horonantsary, ny mpandeha fitsangantsanganana an-dranomasina dia mamaritra ny zavatra niainany nandritra ny dia ho toy ny fotoana ankamamiana hialana sasatra sy hamenoana, feno sakafo mahavariana, andro spa milamina, fandaharana fampiroboroboana ary fialamboly mitaona aingam-panahy.
“Ny horonantsary Transatlantic Crossing dia noforonina ho loharanom-pahalalana ho an'ny vondron'olona mpivaro-tena ho an'i Cunard ary ho toy ny sombin-javatra mampihetsi-po ho an'ireo vahininay mahatoky,” hoy i Josh Leibowitz, filoha lefitra zokiolona, ​​Cunard Amerika Avaratra. "Amin'ny maha marika iray anay, izahay ao amin'ny làlan'ny fitsangantsanganana an-tsambo any Cunard dia nanohy nanavao ny fanavaozana ny fitaovam-barotra sy ny varotra ho an'ny mpanjifa, ary ity horonantsary ity dia mampita ny fanahin'ny Transatlantic Crossing izay henontsika matetika fa tsy azo lazaina."
Manasongadina ny mampiavaka ny tsipika fitsangantsanganana an-tsambo any Cunard ny horonantsary, toy ny refy lehibe sy kanto ao anaty sambo, ary koa ny serivisy fitsangatsanganana an-tsambo tsy manam-paharoa an'ny Cunard. “Tsy misy fomba tsara kokoa hiverenana sy hiampitana ny ranomasina,” hoy i MaryBeth Kardos, mpitsangatsangana Transatlantic mahatoky.
Ireo vahiny sambo mpitsangatsangana avy any Queen Mary 2 dia afaka miala sasatra, miaina fikatsahana vaovao ary mifanena amin'ireo mpandeha mitovy hevitra aminy. Ny hetsika dia miainga amin'ny lesona fandihizana amin'ny dihy, fencing, fanandramana divay ary fizahana ny lanitra amin'ny planeta lehibe indrindra any an-dranomasina. Ny programa Cunard's Insights dia manasongadina ireo manam-pahaizana avy amin'ny indostria isan-karazany miaraka amin'ny atrikasa mahavariana sy Q & As, mamela ny mpandeha fitsangantsanganana hifandray sy hanao fifandraisana manokana. Hetsika manokana ho avy Crossings on Queen Mary 2 sambo fitsangantsanganana ahitana A Journey of Genealogy - fiaraha-miasa amin'ny Ancestry.com, Transatlantic Fashion Week ary World Space Week. Ny sambo fitsangantsanganana Queen Mary 2 dia mamaky ny vanim-potoanan'ny Transatlantic 2018 ankehitriny hatramin'ny volana desambra.